နှလုံးအားနည်းပြီး အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၇) မျိုး . - Focus Myanmar
နှလုံးအားနည်းပြီး အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာ ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၇) မျိုး .
August 13, 2019 By Myanamr Plus in ကျန်းမာရေး, စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း Tags: နှလုံး
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ မကျန်းမာဘူးဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ သိသာတဲ့လက္ခဏာတွေပြလာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အထဲမှာ နှလုံးကျန်းမာဖို့က လူကြီး၊လူငယ်အားလုံးအတွက် အရေးကြီးတာကြောင့် သင့်နှလုံးက အလုပ်သိပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကြိုတင်သတိထားဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ချောင်းဆိုးတာဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး ချောင်းအကြာကြီးဆိုးနေတာကျတော့ နှလုံးသွေးကြောပိုင်းက ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတာက နာတာရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲတာ၊ သွေးပါတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီး နှလုံးကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတာပါ။
နှလုံးကနေ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို သွေးပို့လွှတ်မှု မကောင်းတဲ့အခါ အသားအရောင်က သွေးရောင် မရှိတော့ဘဲ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ဖြူဖျော့လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသားအရောင်ဖြူဖျော့နေရင် နှလုံးမကောင်းတာကြောင့်လို့ တစ်ထစ်ချ မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ နှလုံးမကောင်းလို့လား၊ သွေးအားနည်းတာကြောင့်လားဆိုတာ သိရဖို့ သေချာစစ်ဆေးရမှာပါ။
နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေမှာ ဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာ နာကျင်တတ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ညာဘက်လက်မောင်းနာကျင်တာကို ပိုသတိထားရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်မောင်းလည်း အနည်းငယ်နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေလည်း မဖြစ်ပါဘဲ လက်မောင်းရင်းနဲ့ လက်မောင်းတလျှောက်မှာ အကြောင်းမဲ့နာကျင်တာတွေဖြစ်ရင် နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးကနေ သွေးထုတ်ပေးမှု နည်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဆီ သွေးရောက်ရှိမှု နည်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေထောက်တွေကတော့ မြေဆွဲအားသက်ရောက်မှုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်လာရတာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ခြေထောက်တွေဖောင်းတာ၊ ရောင်တာမကြာခဏဖြစ်တတ်ရင် နှလုံးအားနည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၅) အချိန်တိုင်းလိုလို ရင်ပြည့်ပြီးပျို့နေတာ
တစ်ခုခုစားလိုက်ပြီဆို တစ်ကိုက်နှစ်ကိုက်လောက် စားပြီးတာနဲ့ ရင်ပြည့်ပြီး ပျို့အန်ချင်လာတာမျိုးဖြစ်နေရင်လည်း မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့လိုဖြစ်တာက အသည်းနဲ့အစာချေအူလမ်းကြောင်းတွေမှာ သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းဘူး၊ သွေးရောက်ရှိမှု အရမ်းနည်းနေတာကြောင့်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးက ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်လို့ သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းတဲ့အခါ စိတ်အရမ်းဆတ်လာပြီး ဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ စိတ်အရမ်းဆတ်ပြီး၊ စိတ်တိုလွယ်လွန်းနေရင် နှလုံးအားနည်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
နှလုံးက သွေးကောင်းကောင်းမထုတ်ပေးတဲ့အခါ သွေးလွှတ်ကြောတွေမှာ သွေးခဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီး နှလုံးသွေးကြောက တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းလာပါတယ်။ တခါတလေ အသက်ရှူကြပ်တာမျိုး၊ ရုတ်တရက်ခေါင်းမူးပြီး မျက်လုံးတွေပြာလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတွေ ခဏခဏဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်နေပါပြီ။
နှလုံးအားနညျးပွီး အလုပျမလုပျဘူးဆိုတာ ပွနတေဲ့ လက်ခဏာ (၇) မြိုး .
ခန်ဓာကိုယျအတှငျးက အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှေ မကနျြးမာဘူးဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျပွငျပမှာ သိသာတဲ့လက်ခဏာတှပွေလာတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့အထဲမှာ နှလုံးကနျြးမာဖို့က လူကွီး၊လူငယျအားလုံးအတှကျ အရေးကွီးတာကွောငျ့ သငျ့နှလုံးက အလုပျသိပျမလုပျတော့ဘူး၊ အသကျအန်တရာယျစိုးရိမျရတယျဆိုရငျ ဖွဈလာတတျတဲ့ လက်ခဏာတှကေို ကွိုတငျသတိထားဖို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော
ခြောငျးဆိုးတာဟာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ဖွဈနိုငျပွီး ခြောငျးအကွာကွီးဆိုးနတောကတြော့ နှလုံးသှေးကွောပိုငျးက ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျလို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ခြောငျးဆိုးတာက နာတာရှညျဖွဈလာတဲ့အခါ ၊ အသကျရှူရခကျခဲတာ၊ သှေးပါတာတှဖွေဈနိုငျပွီး နှလုံးကို ထိခိုကျမှုဖွဈစတောပါ။
နှလုံးကနေ တခွားခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို သှေးပို့လှတျမှု မကောငျးတဲ့အခါ အသားအရောငျက သှေးရောငျ မရှိတော့ဘဲ တဈနထေ့ကျတဈနဖွေူ့ဖြော့လာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသားအရောငျဖွူဖြော့နရေငျ နှလုံးမကောငျးတာကွောငျ့လို့ တဈထဈခြ မှတျယူလို့မရပါဘူး။ နှလုံးမကောငျးလို့လား၊ သှေးအားနညျးတာကွောငျ့လားဆိုတာ သိရဖို့ သခြောစဈဆေးရမှာပါ။
နှလုံးကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတဲ့အခါ အမြိုးသားတှမှော ဘယျဘကျလကျမောငျးမှာ နာကငျြတတျပွီး ၊ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ညာဘကျလကျမောငျးနာကငျြတာကို ပိုသတိထားရမှာဖွဈပွီး ဘယျဘကျလကျမောငျးလညျး အနညျးငယျနာကငျြတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ထိခိုကျမှုတှလေညျး မဖွဈပါဘဲ လကျမောငျးရငျးနဲ့ လကျမောငျးတလြှောကျမှာ အကွောငျးမဲ့နာကငျြတာတှဖွေဈရငျ နှလုံးကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
နှလုံးကနေ သှေးထုတျပေးမှု နညျးတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ တခွားအစိတျအပိုငျးတှဆေီ သှေးရောကျရှိမှု နညျးသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခွထေောကျတှကေတော့ မွဆှေဲအားသကျရောကျမှုနဲ့အနီးကပျဆုံးဖွဈတာကွောငျ့ ရောငျရမျးမှုတှဖွေဈလာရတာပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ခွထေောကျတှဖေောငျးတာ၊ ရောငျတာမကွာခဏဖွဈတတျရငျ နှလုံးအားနညျးနတောကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၅) အခြိနျတိုငျးလိုလို ရငျပွညျ့ပွီးပြို့နတော
တဈခုခုစားလိုကျပွီဆို တဈကိုကျနှဈကိုကျလောကျ စားပွီးတာနဲ့ ရငျပွညျ့ပွီး ပြို့အနျခငျြလာတာမြိုးဖွဈနရေငျလညျး မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့လိုဖွဈတာက အသညျးနဲ့အစာခအြေူလမျးကွောငျးတှမှော သှေးလှညျ့ပတျမှု မကောငျးဘူး၊ သှေးရောကျရှိမှု အရမျးနညျးနတောကွောငျ့လို့ပွောနိုငျပါတယျ။
နှလုံးက ကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျလို့ သှေးလှညျ့ပတျမှု မကောငျးတဲ့အခါ စိတျအရမျးဆတျလာပွီး ဒေါသကို ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးလညျး နညျးလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ စိတျအရမျးဆတျပွီး၊ စိတျတိုလှယျလှနျးနရေငျ နှလုံးအားနညျးတာဖွဈနိုငျတယျဆိုတာကို သတိရပါ။
နှလုံးက သှေးကောငျးကောငျးမထုတျပေးတဲ့အခါ သှေးလှတျကွောတှမှော သှေးခဲတာမြိုးတှဖွေဈလာပွီး နှလုံးသှေးကွောက တဖွညျးဖွညျးကဉျြးမွောငျးလာပါတယျ။ တခါတလေ အသကျရှူကွပျတာမြိုး၊ ရုတျတရကျခေါငျးမူးပွီး မကျြလုံးတှပွောလာတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုတှေ ခဏခဏဖွဈဖူးတယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသငျ့နပေါပွီ။